Gadra mandra-pahafaty ny iray… : gadra telo lahy tafatsoka ny fonjan’Antanimora | NewsMada
Gadra mandra-pahafaty ny iray… : gadra telo lahy tafatsoka ny fonjan’Antanimora
Par Taratra sur 12/02/2018
Rafalimanana Nirina Dominique, Rakoarisoa Henintsoa Raphalk ary Raharijaona Solofoniaina. Ireo izy telolahy, gadra tafatsoaka ny fonjan’Antanimora, ny alin’ny asabotsy hifoha omaly alahady. Iry voalohany izay voaheloka higadra mandra-pahafatiny.
Gadra telo voalaza fa tafatsoaka tao amin’ny fonjan’Antanimora ny asabotsy hifoha alahady teo, tao amin’ny secteur A1. Manodidina ny tamin’ny 12 ora alina ka hatramin’ny 3 ora maraina teo ny nitsoahan’izy telo lahy. Tsy fantatra mazava ny antony nitsoahan’izy ireo. Voalaza fa mety nihanika rindrina izy ireo ary tafatsoaka tamin’ny varavarankely. Efa mandeha ny fikarohana azy telo lahy, efa misy ny fampahafantarana momba azy ireo.
Rafalimanana Nirina Dominique, voafonja (MD- 11 / 09 / 2012) noho ny resaka fanaovana vola sandoka, efa notsaraina ka gadra mandram-pahafatiny. Faharoa, Rakoarisoa Henintsoa Raphalk, voafonja ( MD- 17 /03 / 09 ) noho ny resaka vono olona, ka voasazy15 taona an-tranomaizina. Ary farany, Raharijaona Solofoniaina, voafonja (MD – 05 / 04 /2017) noho ny raharaha fanolanana, fa mbola tsy voatsara izy ity.
Efa am-pelatanan’ny mpitandro filaminana ny mombamomba azy telo lahy. Nilaza ny zandary fa tamin’ny 2 ora tolakandro, ny 11 febroary, naterin’ny iraka avy any amin’ny fonja teny amin’ny zandary ny mombamomba ireo gadra ireo sy ny sarin’ny roa tamin’ireo telo nandositra, ka efa natao ny fanaparitahana izany tamin’ny toby rehetra mba handefasana zandary hanao ny fikarohana azy ireo. Nisy ihany koa ny famoriana ny mpandraharaha fonja amin’ny fikarohana ireto gadra nitsoaka ireto. Soa ihany fa tsy nisy nanaraka azy ireo ny voafonja sasany, raha tsy izany mety ho raharaha ihany.
Taorian’ny nahatafatsoaka an’i Houcine Arfa, ity indray ny gadra tafatsoaka teto an-dRenivohitra. Heverina fa tsy hisy mihitsy ny gadra mety tafatsoaka ny fonjan’Antanimora,saingy miseho ihany ankehitriny.
Mila jerena haingana
Loza mitatao amin’ny fiaraha-monina raha ny fonjan’Antanimora, na Tsiafahy no vaky na mahatafatsoaka gadra tahaka izao, na sanatria miverimberina. Ilana vahaolana haingana ny fijerena ireo fonja rehetra eto amintsika. Efa antitra sy tranainy avokoa ny fotodrafitrasa ary iaraha-mahalala fa efa mihoatra amin’ny isa zakany ny voafonja tazonina ao.
Tsy mahagaga raha mitranga ny fikasana hamaky fonja, sns.
Matetika mialoka amin’ny tsy fahampian’ny fitaovana sy ny enti-manana ny fanjakana rehefa misy ny olana. Tsy laharam-pahamehana anefa ohatra ny teti-bola ho an’ny fikarakarana ny fonja, na fanitarana rehefa amin’ny fotoana fandaniana izany. Mbola ezaka ho an’ny fanjakana ny fandaminana ny tontolon’ny fonja sy ny voafonja.